ရန်ကုန်အိမ်ထောင်ဦးစီးထံသို့ စာရင်းစစ်ဝင်ခြင်း – The Voice Journal
Articles / Business / Politics / Special Reports
by The Voice Journal Sep 22, 2018
မိသားစုတစ်ခု၏ ဝင်ငွေထွက်ငွေစာရင်းများကို အိမ်ရှင်မက စစ်ဆေးလေ့ရှိသည်။ တစ်လဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေများကို ချိန်ဆသုံးရန် ဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်ဦးစီး၏ မည်သည့်လုပ်ငန်းက မည်မျှအမြတ်ရ၏။ ထို့ကြောင့် သားသမီးများ၏ ပညာရေးအတွက် ပိုသုံးမည် သို့တည်းမဟုတ် နောင်ရေးအတွက် စုဆောင်းမည်၊ မိဘဆွေမျိုးများအား ထောက်ပံ့မည် ဆုံးဖြတ်ရသည်။
ထိုမျှမကသေး။ အိမ်ထောင်ဦးစီး၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဝင်ငွေရလမ်းများကိုလည်း အကြံဉာဏ်ပေးလေ့ရှိသည်။ အိမ်ထောင်ဦးစီး၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အရှုံးပေါ်သည့်အခါ မိသားစု၏ မည်သည့်နေရာများက အသုံးစရိတ် လျှော့ချမည်ကို စိစစ်သည့်အပြင် အရှုံးပေါ်နေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ကယ်တင်ရန်နည်းလမ်း သို့မဟုတ် ဆက်တိုက်ရှုံးနေသည့် လုပ်ငန်းကို ဆက်မလုပ်ရန် အကြံဉာဏ်များ ပေးမည်သာ။
အိမ်ရှင်မ၏ အလုပ်တာဝန်က ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မျှတ၍ မလိုလားအပ်သည့် နေရာများတွင် ငွေမကုန်ရေး။ စီးသည့်ရေအတွက် ဆည်သည့်ကန်သင်းတစ်ခုပင်။
လူဦးရေ ခုနစ်သန်းကျော် နေထိုင်သည့် ရန်ကုန်တိုင်း မိသားစုကြီးအတွက် ဆည်သည့် ကန်သင်းတာဝန်ကို ယူထားရသူက ရန်ကုန်တိုင်း စာရင်းစစ်ချုပ်အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း၏ အိမ်ထောင်ဦးစီးဟု မိမိကိုယ်ကိုယ် ခံယူထားသူ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း အစိုးရအဖွဲ့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ အသုံးစရိတ်များကို ရန်ကုန်တိုင်း၏ အိမ်ရှင်မတာဝန်ကို ယူထားသည့် ရန်ကုန် တိုင်းစာရင်းစစ်ချုပ်အဖွဲ့က တစ်နှစ်တစ်ခါ စစ်ဆေးရေးဝင်သည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ဝင်ငွေထွက်ငွေ အသုံးစရိတ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ငွေ ကြေးသုံးစွဲမှုစသည်တို့ကို စစ်ဆေးခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် စာရင်းစစ်ချုပ်က စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာကို တင်ခဲ့သည်။
ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရ၏ စီပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့သည် ကျပ်သန်းချီ အရှုံးပေါ်နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းစာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်ခင်သန်းလှက ထောက်ပြခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ၏ မည်သည့်လုပ်ငန်းက မည်မျှအရှုံးပေါ်နေကြောင်းကို စေ့ငုကြည့်ကြပါစို့။
ကျပ်သန်း ၄၇၀၀ နီးပါး အရှုံးပေါ်သည့် YBS
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက် တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် အမိန့်ဖြင့် မ.ထ.သ ကို ဖျက်သိမ်းကာ YBS ဘတ်စ်ကားစနစ်ကို အသက်သွင်းခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့နေထိုင်သူများ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် အဲယားကွန်းတပ် ဘက်စ်ကားအသစ်ကြီးများကို ငွေ ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် စီးနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ခရီးသည်ကို ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံသည့် ယာဉ်နောက်လိုက်များ နိဂုံးချုပ်သွားသည်။
ထိုသို့စီးနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရက ကျပ်ငွေ ၇၈ ဘီလီယံ သုံးစွဲထားပြီး ၂ နှစ်ကျော်အတွင်း ကျပ်သန်း ၄၇၀၀ နီးပါး အရှုံးပေါ်ခြင်းကို ရန်ကုန်သားတို့ သိပါလေစ…။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကား အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် အမည်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ဘတ်စ်ကားအစီး ၁၀၀၀ ကို ကျပ် ၇၇ သန်းနှုန်းဖြင့် တရုတ်အစိုးရထံမှ ဝယ်ယူခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ဘတ်စ်ကားအစီး ၁၀၀၀ ဝယ်ယူရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ပေးသည့် ကျပ် ၇၀ ဘီလီယံဖြင့် မလုံလောက်သည့်အတွက် ကျပ် ရှစ်ဘီလီယံကို ဧရာဝတီဘဏ်မှ ချေးယူခဲ့သည်။
ထို ကျပ် ၇၈ ဘီလီယံဖြင့် ဝယ်ယူထားသည့် ဘတ်စ်ကားများကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက ရှယ်ယာပါဝင်ထားသော ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားအများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ (YPBC) နှင့် ရန်ကုန်မြို့ပြ အများပြည်သူသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် (YUPT) ကို ခွဲဝေခဲ့သည်။
YPBC နှင့် YUPT အများပိုင် ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု၏ လုပ်ငန်းများမှ ကျပ်သန်း ၄၇၀၀ နီးပါး (၄၆၈၅ သန်း) အရှုံးပေါ်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာ နှစ်များတွင် အရှုံးပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
YPBC သည် အဆိုပါသုံးနှစ်အတွင်း တစ်နှစ်မှ အမြတ်မရဘဲ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် အရှုံးပေါ်ကာ စုစုပေါင်း အရှုံးပမာဏ ကျပ်သန်း ၄၀၈၀ ကျော်ရှိသည်။
YUPT ကမူ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာ နှစ်တွင် ကျပ်သန်း ၂၅ သန်းကျော် အမြတ်ရရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ် ၆၀၃ သန်းကျော် အရှုံးပေါ်ကာ အဆိုပါ ၂ နှစ်အတွက် စုစုပေါင်း ကျပ် ၅၇၇ သန်း အရှုံးပေါ်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရသည် ပြည်သူများမှ ရရှိသော အခွန်အခများဖြင့် YBS ဘတ်စ်ကားများထောင်သည့် အများပိုင်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုတွင် ရှယ်ယာထည့်၍ စီးပွားရေးလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တိုင်းအစိုးရ ရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသော ကုမ္ပဏီများ၏ အရှုံးသည် ရန်ကုန်နေ ပြည်သူများ၏ ငွေကြေးများ ဆုံးရှုံးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ၏ ဘတ်စ်ကားအများပိုင်ကုမ္ပဏီ ကျပ်သိန်းချီကာ အရှုံးပေါ်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရင်းကို တိုင်းအစိုးရက အသေးစိတ် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ရန်ကုန်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့တည်ထောင်သူ ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ဆိုသည်။
“အန်တီကတော့လေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် အစိုးရကို ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြည့်စုံတဲ့ သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ပြန်ပေးမှု မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ရှုံးတယ်ဆိုတာပဲ သိရတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
YBS ဘတ်စ်ကားပြေးဆွဲသည့် ကုမ္ပဏီများတွင် တိုင်းအစိုးရရှယ်ယာ ထည့်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများသာမကဘဲ အခြားပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီများပါ အရှုံးပြနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒဂုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်တွင် ရွှေတိဂုံဘုရားပြီးလျှင် မ. ထ . သ သည် အချမ်းသာဆုံးဟူ၍ပင် ဆိုရအောင်ပင် အမြတ်အစွန်းများခဲ့သည့် ရန်ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ယခုကဲ့သို့ ကျပ်သန်းထောင်ချီအရှုံးပေါ်ရခြင်းသည် တိုင်းအစိုးရစီးပွားရေး အမြော်အမြင်ရှိမှုအပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်သည်။
“သူတို့က ရှုံးတယ်ဆိုရင် ငါတို့က ပိုရှုံးတယ်” ဟု သာကေတမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ဒေါ်ယွန်းစန္ဒီ က ဝေဖန်သည်။
YBS ဘတ်စ်ကားများသည် တစ်ဆင့်တည်း မရောက်ဘဲ အနည်းဆုံး နှစ်ဆင့်ပြောင်းစီးရသည့်အတွက် ဘတ်စ်ကားခသည် ယခင် မ.ထ.သ ခေတ်ကထက် နေ့စဉ်ပိုကုန် နှစ်ဆပိုကုန်သည်။
“အရင်ကထက် ဘတ်စ်ကားခ ပိုကုန်တယ်လေ။ မြို့ပတ်ကားမစီးမနေရ လုပ်ထားတာကို မြို့ထဲကို နှစ်ဆင့်မစီးဘဲ မရောက်နိုင်ဘူး”ဟု ဒေါ်ယွန်းစန္ဒီက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
သို့သော်လည်း အဲယားကွန်းဘတ်စ်ကားကို ၂၀၀ ကျပ်ဖြင့် စီးနိုင်သည့်အတွက် ကျေနပ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
YBS ဘတ်စ်ကားများသည် ငွေကြေးအရ အရှုံးပေါ်နေသည်ဆိုသော်လည်း Social Profit (လူမှုရေးနှင့်ပတ်သက်သော အကျိုးအမြတ်) တွင် အမြတ်ရရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းစာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်ခင်သန်းလှက ဆိုသည်။
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ကျပ် ၇၈ ဘီလီယံ သုံးစွဲခြင်းမှ ရရှိသည့် Social Profit သည် ကုန်ကျသည့် ငွေနှင့် တန်ပါ၏လော။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာညိုညိုသင်းကမူ ကျပ် ၇၈ ဘီလီယံသုံးပြီးမှ ရရှိသည့် Social Profit ကို တန်သည်ဟု ယူဆဟန်မတူ။
“ဒီလိုအဲယားကွန်းကား စီးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်မှာ မမြင်လိုက်ရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ အများကြီး ရှိသွားတယ်။ နေ့စဉ် အဲယားကွန်းကားစီးလိုက်ရတဲ့ ကိုယ်ရမယ့် တခြားသော အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီး ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာ သာမန်ပြည်သူလူထုက သိမှာလည်း မဟုတ်ဘူး”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက ၄၆၄ စတုရန်းပေရှိသည့် တန်ဖိုးနည်းအိမ် တစ်ခန်းကို ကျပ် ၉၈ သိန်းဖြင့် ရောင်းချသည်။ ထိုတန်ဖိုးနှင့် တွက်ချက်ပါက ရန်ကုန် တိုင်းအစိုးရ ဘတ်စ်ကား အများပိုင်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် ကျပ် ၇၈ ဘီလီယံသည် အိမ်ပိုင် မရှိသူများအတွက် တန်ဖိုးနည်း တိုက်ခန်းပေါင်း ၇၉၅၉ ခန်းခန့် တည်ဆောက်ပေးနိုင်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင် ထိုတိုက်ခန်း ပမာဏသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု အားလုံးနီးပါးအတွက် လုံလောက်သော နေအိမ်များကို ဖန်တီးနိုင်သည့် ငွေကြေးပမာဏ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကောက်ခံခဲ့သည့် ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရန်ကုန်တိုင်းဆိပ်ကြီးခနောင်တို မြို့နယ်တွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၇၇၀၀ ကျော် ရှိသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရသည် YBS ဘတ်စ်ကားတွင် ကျပ်သန်းထောင်ချီ အရှုံးပြရုံမျှမက တိုင်းအစိုးရ တည်ထောင်ထားသည့် အများပိုင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော Yangon Metropolitan Development Public (YMD) ကုမ္ပဏီနှင့် New Yangon Development Public (NYDC) ကုမ္ပဏီတို့သည်လည်း လုပ်ငန်းစတင်ခြင်း မရှိသေးမီ စီမံခန့်ခွဲမှု အသုံးစရိတ်များ ကျပ်သန်းနှင့်ချီ သုံးစွဲထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း စာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်ခင်သန်းလှက ထောက်ပြသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ထည့်ဝင်ငွေ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ မြန်မာ့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ (MCD) က ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် Yangon Metropolitan Development (YMD) သည် အရှုံးပေါ်လျက် ရှိကြောင်း ၎င်းက ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်တွင် ပြောကြားသည်။
“၈ .၃. ၂၀၁၇ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၇ အထိ စာရင်း များကို ဦးဝင်းသင်နဲ့ စာရင်းစစ်အဖွဲ့က စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း လုပ်ငန်းနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးစရိတ်များကြောင့် ကျပ် ၁၁ ဒသမ ၄၆၀ သန်း အရှုံးပေါ်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်” ဟု စာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်ခင်သန်းလှက ဆိုသည်။
YMD ကုမ္ပဏီက မရမ်းကုန်းဗီလာအိမ်ရာ စီမံကိန်း၊ ပါရမီအိမ်ရာ၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်းအငှား/အရောင်း နှင့် Mixed Use စီမံကိန်း၊ ငွေပင်လယ် (Dry Port)၊ ပြည်သူ့ဘ၀မြှင့်တင်ရေးအိမ်ရာ (ကျူးကျော်များ နေရာချထားရေးအိမ်ရာ Project – X) နှင့် ဒဂုံအရှေ့ ခေတ်မီစက်မှုဇုန်နှင့် စက်မှုဇုန်အထောက်အကူပြု အိမ်ရာစီမံကိန်း ခြောက်ခုအတွက် ကျပ် ၅၄ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းစာရင်စစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်သော ၁၁ ဒသမ ၄၆၀ သန်း သုံးစွဲခြင်းသည် အရှုံးပေါ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ယင်းငွေများဖြင့် ဝန်ထမ်း အိမ်ရာဆောက်ရန် စင်ကာပူနိုင်ငံ ဗိသုကာအဖွဲ့ဖြင့် အဆောက်အအုံဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း၊ မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်းများနှင့် ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်တွင် သဲဖို့သည့် နေရာများ၌ ကြိုတင်သုံးစွဲခြင်း ဖြစ်ကြောင်း YMD ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် ဦးမျိုးမြင့်က ရှင်းပြသည်။
“အဲဒီအတွက် ငွေတွေသုံးထားတဲ့ သဘောပါ။ ရှုံးထားတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့မရှုံးလဲဆိုရင် ထည့်ထားတဲ့ ငွေတွေကနေ အတိုးရတာရှိတယ်လေ။ သုံးတဲ့ငွေက အတိုးရတာထက် နည်းနေတဲ့အတွက် မရှုံးတာ အဲဒီသဘောပဲ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
YMD ကုမ္ပဏီက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် ငွေများကို အတိုးရရှိသည့် ဘဏ်တွင်ထားရှိပြီး ဘဏ်မှ အတိုး ကျပ် ၂၂၈၉ သန်းကျော် ရရှိထားကြောင်း စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာအရ သိရှိရသည်။
သို့သော်လည်း ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းအရ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေများကို အတိုးရသည့် ဘဏ်များတွင် အပ်နှံမှုကို တားမြစ်ထားသည်။ YMD ကုမ္ပဏီတွင် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေ ၅၄ ဘီလီယံ ပါရှိသည်။
“အတိုးရတဲ့ အကောင့်ထဲမှာ မထားရဘူး။ အတိုးလည်း မရလည်း မရသင့်ဘူး။ အတိုးကို ယူကို မယူရတာ။ ပြည်သူလူထု ပိုက်ဆံဖြစ်တဲ့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အရ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှာပဲ ရှိရမယ်” ဟု တိုင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဒေါ်ညိုညိုသင်း က ထောက်ပြသည်။
YMD ကုမ္ပဏီ၏ ရည်ရွယ်ချက်ထဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ကျူးကျော်နေထိုင်သူများကို နေရာချပေးရန် အချက်ပါဝင်သော်လည်း ယနေ့အချိန် အထိ ကျူးကျော်အိမ်ရာတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းအစိုးရက တိကျသော သတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးချေ။
“YMDရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာထဲမှာ ပါတယ်။ ကျူးကျော်တွေကို လိုင်းခန်းတွေ ဆောက်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်။ ဒီနေ့အထိ ဘယ်လိုဆောက်နေလဲ။ ဘယ်လောက်အထိ ပြီးနေပြီလဲ။ မဆောက်နိုင်သေးဘူးလေ။ တိုက်ပေါ် တင်လိုက်တဲ့ ကျူးကျော်ဘယ်နှဦးရှိနေပြီလဲ။ သတင်းထဲမှာလည်း မတွေ့သေးဘူးလေ။ အဲဒါတွေက ထောက်ပြစရာတွေပေါ့”ဟု တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့ကြီးတွင် မိုးရွာတိုင်း ရေကြီးကာ ချောင်းအသစ်၊ မြစ်အသစ်များပေါ်နေချိန်၊ ယာဉ်ကြော ကျပ်တည်းခြင်း၊ အမှိုက်ပြဿနာများကြား ရုန်းကန်နေရသည့်ရန်ကုန်မြို့သည် များမကြာမီ မြို့ဟောင်းဘွဲ့ကို ထပ်မံရတော့မည်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းကား စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ နှစ်ဆမျှ ရှိမည်ဆိုသော ရန်ကုန်မြို့သစ်ကြီးကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက ထူထောင်ထားသော ကုမ္ပဏီဖြင့် တည်ဆောက်ရန် စိုင်းပြင်းနေသောကြောင့်ပင်။
ကြည့်မြင်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်းတွင် ရန်ကုန် မြို့သစ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရန် တိုင်းအစိုးရ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်သည့် NYDC ကုမ္ပဏီကို ကျပ် ၁၀ ဘီလီယံဖြင့် တည်ထောင်ထားသည်။
NYDC ကုမ္ပဏီသည် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ဝင်ငွေရရှိခြင်း မရှိသေးသော်လည်း အသုံးစရိတ် စုစုပေါင်း ၉၂ ဒသမ ၆၁၁ သန်း သုံးစွဲထားကြောင်း စာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်ခင်သန်းလှက ဆိုသည်။
မြို့သစ်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး ပြီးစီးရန်အတွက်မူ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးဘီလီယံကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း FMI ကုမ္ပဏီအုပ်စု ဥက္ကဋ္ဌဦးသိမ်းဝေက ဆိုသည်။
ဦးသိမ်းဝေက NYDဃ ၏ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူထားသူလည်းဖြစ်ပြီး မြို့သစ်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရန်အတွက် လိုအပ်နေသော အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၉၉၃ ဘီလီယံရှာဖွေရမည့် တာဝန်ကို ယူထားသူဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရသည် အနုတ်လက္ခဏာပြနေသကဲ့သို့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (YCDC) သည်လည်း ပြည်သူပိုင်မြေများကို လွန်စွာသက်သာသော နှုန်းထားများဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ငှားရမ်း ထားသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပန်းဥယျာဉ်နှင့် ကစားကွင်များဌာနက ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်သူ့ရင်ပြင်အတွင်းရှိ မြေ ၇၆ ဒသမ ၃၆ ဧကကို တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၁၂၇၇ သန်းကျော်ဖြင့် ငှားရမ်းထားသည်။ ထိုဈေးနှုန်းအရ မြေတစ်ပေပတ်လည် အတွက် ငှားရမ်းခ ၃၂ ကျပ်နှုန်းသာ ရရှိသည်။
ထို့ပြင် ကရဝိတ်ဥယျာဉ်ကမ္ဘာရှိ မြေဧက ၁၉ ဒသမ ၁၁ ဧကကို ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီသို့ တစ်ပေပတ်လည်လျှင် ၄၇ ကျပ်ဖြင့် ငှားရမ်းထားသည်။
လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျောတစ်ခင်းစာ (ခုတင်တစ်လုံးစာ ၄ ပေ ဍ္ဍ ၆ ပေ အကျယ်) အတွက် အနည်းဆုံးကျပ် ငါးသောင်းပေးရသည့်အတွက် ထိုဈေးဖြင့်တွက်ချက်လျှင် တစ်ပေပတ်လည်ကို ကျပ် ၂၀၀၀ ကျော်ပေါက်ဈေး ရှိသည်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ရန်ပင် အချက်အချာကျသည့် မြို့နယ်အချို့တွင် ပေ ၅၀ ပတ်လည် မြေတစ်ကွက်ကိုပင် တစ်လ ငှားရမ်းခမှာ ကျပ်သိန်း ၅၀ မှ ၇၀ ကြားတွင် ဈေးပေါက်နေကြောင်း မဏ္ဍိုင် အိမ်ခြံမြေနှင့် အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းက အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးသန်းဦးက ရှင်းပြသည်။
“ရန်ကုန်မှာ မြေကွက်ကျယ်တွေ ငှားနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင် မရှိဘူး။ အစိုးရမြေတွေပဲရှိလို့ အစိုးရကပဲ ငှားတာလေ။ ကန်ပတ်လမ်းလို နေရာမျိုးမပြောနဲ့ ရိုးရိုးလမ်းမတန်းတောင်မှ မြေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဒေါ်လာ ထောင် သောင်းချီ ပေးငှားရတာ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့၏ မြေပေါက်ဈေးကို တစ်ပေပတ်လည် ကျပ် ၄၀ ကျော်ဖြင့် တွက်ချက်ငှားရမ်းသည့် YCDC ၏ ငှားရမ်းခမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာပင် ဖြစ်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က အဆိုပါမြေနေရာများကို တစ်ပေပတ်လည်လျှင် ၆ ကျပ်ဖြင့် ငှားရမ်းထားပြီး လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်တွင် ကျပ် ၄၀ ကျော်အထိ တိုးမြှင့်ငှားရမ်းထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သက်သာသောနှုန်းထားများဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများသို့ မြေငှားရမ်းသည့် YCDC သည် တစ်နေ့ဝင်ငွေ ကျပ်လေးသိန်းရရှိသည့် လုပ်ငန်းကို ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီထံသို့ တစ်ရက် ကျပ်ရှစ်သောင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ချပေးပြန်သည်။
စည်ပင်အခွန်ဌာနက အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တစ်ရက်လျှင် အခွန်ငွေ လေးသိန်းကျပ် ကောက်ခံနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ငန်းကို ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီသို့ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးပြီးနောက် တစ်ရက်လျှင် ကျပ်ရှစ်သောင်းကျော်သာ အခွန်ရရှိသည့်အတွက် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီအား အခွင့်အလမ်း ပိုပေးနေသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း စာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်ခင်သန်းလှက လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဝေဖန်သည်။
ထိုမျှမက ကျောင်းတံတားမြို့နယ် ကမ်းနားလမ်းရှိ စုပေါင်းရုံးကို တစ်နှစ်ကျပ်သန်း ၄၀၀ ဖြင့် ငှားရမ်းထားသော်လည်း ငှားရမ်းခပင် ရရှိခြင်းမရှိချေ။
တိုင်းအစိုးရရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အရှုံးပေါ်ခြင်း၊ ရရှိသင့်သော ငှားရမ်းခ၊ အခွန်အကောက်များ လျော့နည်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ၄၃ç၄၈၅ ဒသမ ၆၀၈ သန်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘဏ္ဍာနှစ် စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော် လုပ်ငန်းစဉ်အရ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီက သုံးသပ်ချက် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုအစီရင်ခံစာကို တိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ဆွေးနွေးရန် အမည်စာရင်း တောင်းခံကာ ဆွေးနွေးလိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များက အမည်စာရင်းပေးကာ တစ်ဦးချင်းဆွေးနွေးရမည် ဖြစ်သည်။
ကျပ်သန်းချီသည့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေများ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိရေးသည် တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ပေါ်တွင် မူတည်ချေပြီ။
“စီမံကိန်းကော်မတီကတော့ ဆွေးနွေးဖို့ ခွဲပြီးသွားပြီ”ဟု ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ဇေယျက ဆိုသည်။
လက်ရှိကျင်းပလျက်ရှိသည့် ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် အဆိုပါ အစီရင်ခံစာကို အပြီးအပြတ် ဆွေးနွေးအတည်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။
လူဦးရေ ခုနစ်သန်းကျော်နေထိုင်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းမိသားစုကြီးသည် ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမမျှ ဖြစ်နေချေပြီ။
ယင်းအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန် စောင့်ကြည့်အဖွဲ့တည်ထောင်သူ ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ထိုသို့ဆိုသည်။
“ပိုက်ဆံမရှာနိုင်ရင်တော့ အိမ်ထောင်ဦးစီး မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ကွယ်”
Tags: YBSပို့ပို့ရန်ကုန်စည်ပင်၏ ငှားရမ်းခနှုန်းထားများရန်ကုန်တိုင်းစာရင်းစစ်ချုပ်အဖွဲ့ရန်ကုန်တိုင်း၏ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေရန်ကုန်မြို့သစ်အရှုံးပေါ်နေသည့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရပြည်တွင်း
မလွှဲတောင်မြေပြိုမှုကြောင့် ကော့သောင်းလေကြောင်းခရီးစဉ် MNA ခေတ္တရပ်နား
မကျဆုံးသေး … သို့သော်
NLD သောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်ပါဦးမည်လော
Next story “ နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းတဲ့ ကားတွေအပေါ်ပဲ မှီခိုတာမဟုတ်ဘဲ ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုက ပိုကြီးလာတယ်”
Previous story မူးယစ်ဆေးသတင်းပေးသူကို သမ္မတအပါအဝင် သုံးဦးသာသိ ဟုဆို